वाणिज्य बैंक Archives | Nepalbahas - Investigative Journalism from Nepal - Civil Bank Limited
मोटर बाटो नभएको ठाउँमा जनता बैंकले खोल्यो ३ शाखा
काठमाडौं । मोटर बाटो नै नभएको हुम्लाको तीन गाउँपालिकामा जनता बैंकले शाखा खोलेको छ । नेपाल सरकारले सबै स्थानीय तहमा क वर्गका बैंकको पह्ँच पुर्याउने नीति लिएपछि वाणिज्य बैंकहरुले तिब्र रुपमा शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । सरकारको यो योजनालाई आत्मसाथ गर्दै जनता बैंकले कर्णाली प्रदेशको अति विकट जिल्ला हुम्लाको तीनवटा गाउँपालिकामा शाखा स्थापना गरी एकैसाथ कारोवार सुभारम्भ गरेको छ । हुम्ला जिल्लाको अदानचुली गाउँपालिका, चंखेली गाउँपालिका र ताजाकोट गाउँपालिकाबाट कारोवार सुरु गरिएको बैंकले जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बजारमा नगद अभावको समस्या पुनः सृजना हुने अवस्था आएको छ । कर्मचारीलाई तलब, भत्ता र विभिन्न सेवा सुविधाको नाममा बजेटको अंशहरु खर्च भए पनि विकास निर्माण लगायत अन्य ठूला आयोजनाका लागि सरकारी रकम खर्च हुन नसक्दा गएका वर्षमा झैँ फेरि तरलता अवाभको संकेतहरु देखिन थालेको बैंकरहरु स्वयंम नै बताउन थालेका छन् । दशैं, तिहार र छठ पर्वजस्ता नेपालीहरुले मान्ने ठूला चाडपर्वहरु आएसँगै सर्वसाधारण जनताले बैंकमा जम्मा भएको रकमको ठूलो हिस्सा बजारमा पुर्याएका छन् । चाडपर्वमा मिठो खाने र राम्रो लगाउन सबैलाई मन लाग्ने नै भयो ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । प्रभु बैंक लिमिटेडले दशैं अवधिभर ग्राहकका लागि बैंक खोल्ने सुचना जारी गरेको छ । बैंकले दिएको जानकारी अनुसार तपशिल बमोजमका आफ्ना विभिन्न शाखा कार्यालयबाट सहज रुपमा सेवा दिने जनाएको छ ।	थप पढ्नुहोस्
दशैंमा राष्ट्र बैंकले पैसा नपठाउँदा हुम्लामा नयाँ नोटको अभाव
हुम्ला । नेपालीको ठूलो चाड बडादशैं लागेसँगै जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटमा रहेको एक मात्र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खुद्रा पैसाको अभाव भएको छ । यस वर्ष दशैंमा राष्ट्र बैंकले पैसा नपठाउँदा खुद्रा पैसाको अभाव देखिएको हो । दशैंको घटस्थापना शुरु भएपछि ग्राहक नयाँ नोटको खोजीमा बैंकमा लिन आए पनि बैंकसँग पर्याप्त मात्रामा नोट नहुँदा दिन नसकिएको वाणिज्य बैंक सिमकोट शाखाका निमित्त प्रबन्धक मानबहादुर शाहीले बताए । नयाँ नोटका लागि लागि राष्ट्र बैंकसँग माग गरिएको भए पनि हालसम्म नपठाएकाले समस्या भएको बैंककै कर्मचारी भक्त बोहराको भनाइ छ ।	थप पढ्नुहोस्
एनसीसी बैंकको शेयर लिलामीमा उठाउने सुनौलो मौका
८ अर्ब चुक्ता पुँजी पुग्न करीब १ अर्ब बराबरको बोनस शेयर आवश्यक ! काठमाडौं । एनसीसी बैंकले निष्काशन गरेको ५० प्रतिशत हकप्रद शेयरमा आवेदकहरुको न्युन आवेदन परेपछि लिलाम सकार्नेहरुलाई मौका मिलेको छ । प्रारम्भिक तथ्यांक अनुसार बैंकको ६० प्रतिशत हकप्रद मात्र बिक्री भएको छ । लगभग ४० प्रतिशत सेयर भने अब लिलामीमा आउने छ । यसले बैंकको शेयरमा लगानी गरेर शेयरधनी बन्न चाहनेहरुका लागि सुनौलो मौका सृजना भएको छ । बैंकले २ करोड ३३ लाख ९५ हजार २९१ कित्ता हकप्रद शेयर निष्काशन गरेको थियो । पहिलो चरणमा बैंकको हकप्रदमा ज्यादै न्युन आवेदन परे पछि १५ दिन म्याद थप गरेको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
दशैंमा नयाँ गाडी योजना, पुरा गर्दै छ वाणिज्य बैंकले सपना !
काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपालीहरुको महान चाड बडा दशैंको अवसरमा नयाँ योजना सार्वजनिक गरेको छ । नयाँ योजना अन्तरगत बैंकले ९ प्रतिशत ब्याजदरमा नयां गाडी कर्जा सुविधा दिने सार्वजनिक भएको छ । बैंकका अनुसार गाडीको कोटेशनमा अंकित मुल्यको बढिमा ६५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँमध्ये जुन कम हुन्छ सो रकम कर्जा लगानी गरिने छ । कर्जा अवधि ५ वर्ष सम्म भएमा ९ प्रतिशत र ५ वर्ष भन्दा बढि कर्जा अवधि भएमा ९ दशमलव ५ प्रतिशत ब्याजदर लागु हुने छ । बढिमा ७ वर्ष सम्म कर्जा अवधि दिइने उक्त योजना २०७५ कार्तिक मसान्त सम्म मात्र लागु हुने बैंकले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।	थप पढ्नुहोस्
एनएमवि बैंक र कर्जा बजारबीच सम्झौता
काठमाडौं । एनएमवि बैंक र कर्जा बजार बिच सिम्झौता भएको छ । जस अन्तर्गत इच्छुक ग्राहकले सजिलै एनएमबि बैंकको कर्जा सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी लिन सक्ने भएका छन् । ग्राहकले कर्जा बजारबाट कर्जाका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेर कर्जाको अवस्था पनि बुझ्न सक्नेछन । यो सुविधा एनएमबि भिषा क्रेडिट कार्डमा पनि उपलब्ध छ । इच्छुक महानुभावले बैंकको रिटेल कर्जा (घर कर्जा, गाडी कर्जा, शैक्षिक कर्जा आदि ) सम्बन्धी विभिन्न सुविधा जस्तै व्याजदर र कर्जाको अवधिको बारेमा बजारमा उपलब्ध कर्जा सुविधासंग तुलना गर्न सक्नेछन ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । कृत्रिम ऋणी खडा गरी जम्को प्रकाशन प्रालिको नाममा १२ करोडभन्दा बढी ऋण लिने तत्कालिन किष्ट बैंकका सिईओ कमल ज्ञावाली पक्राउ परेका छन् । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले ज्ञावालीलाई भारतबाट पक्राउ गरी नेपाल ल्याएको हो । महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाका प्रमुख एसएसपी धिरजप्रताप सिंहले उनी पक्राउ गरेको जानकारी दिएका छन् । ‘महेन्द्रनगर क्षेत्रबाट पक्राउ गरी ल्याएका छौं’, उनले भने, ‘थप विवरण केहीवेरमा सार्वजनिक गर्छौं ।	थप पढ्नुहोस्
काठमाडौं । संचालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुले ७४ दिनमा ९३ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा तरलता अभावले खुम्चिएका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले यतिबेला कर्जा लगानीको रफ्तार बढाएका छन् भने सोही अवधिमा ६५ अर्ब रुपैयाँ निक्षेपका रुपमा भित्र्याएका छन् । चालु आ।व को साउन महिनादेखि असोज १२ सम्मको अवधिमा नेपालका क वर्गका वाणिज्य बैंकहरुले यो रकम भित्र्याएको नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोत अनुसार वाणिज्य बैंकले रु २५ खर्ब २० अर्ब निक्षेप सङ्कलन गरेका छन् भने रु २२ खर्ब आठ अर्ब कर्जा लगानी गरेका छन् ।	थप पढ्नुहोस्
यो साता शेयर बजारमा प्रभु बैंक अग्रस्थानमा
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा यस साता रु ३ अर्ब ३० करोड ८१ लाख ५६ हजार मूल्य बराबरको शेयर कारोवार भएको छ । कूल १८९ कम्पनीको एक करोड ६७ लाख ७२ हजार २४० कित्ता शेयर खरीद बिक्री भएको नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले जनाएको छ । कारोवार रकम गत साताको भन्दा २६ दशमलव शुन्य दुई प्रतिशतले बढी हो । गत साता १८९ कम्पनीको ९० लाख ७० हजार ७७० कित्ता शेयर रु दुई अर्ब ६२ करोड ५० लाख १४ हजार बराबरको शेयर खरीद बिक्री भएको थियो । यस साता कारोवार रकमका आधारमा प्रभु बैंक लिमिटेड अग्रस्थानमा छ । सो बैंकको रु २३ करोड ३६ लाख १० हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको थियो ।	थप पढ्नुहोस्
चौरजहारीमा वायु सेवा निगमले उडान ...
१७ डिआइजीको सरुवा : ट्राफिकमा दिनेश ...
सरकार र डा.केसी पक्ष बिच सहमतिको ...
स्वास्थ्यकर्मीको १३ बुँदे काठमाडौँ ...
मे दिवसमा प्रधानमन्त्रीको ...
जेठ ५ गतेदेखि तरुण दलको ...
दशैं र तिहारको फुर्सदमा म्याग्दी ...